About Us, Embroidery Thread, Firming Sewing Fread Factory - Ningbo MH Thread Co, Ltd.
I-Ningbo MH Thread Co, Ltd iyimboni eyodwa ye-Ningbo MH Viwanda Co, Ltd Ibheke kakhulu ekuthungeni intambo nokufekethisa ngentambo iminyaka engu-12. Manje i-MH inendawo yezimboni ezintathu enendawo yezitshalo engu-120,000m2, abasebenzi abangama-1900, futhi ifakwe imishini esezingeni eliphakeme kanye nohlelo lokuphatha lokukhiqiza oluqinile, singanikeza amakhasimende ngekhwalithi ephezulu nokwethenjwa.
Umshini Wokubamba Umshini:
Inqubo yokukhiqiza imboni yokukhiqiza i-MH Sewing Thread ifaka phakathi okubandakanya: i-spining yarn, ukudaya, ukukhipha umoya, ukupakisha nokuhlola. Umthamo wokukhiqiza waminyaka yonke ungamathani angama-30000+. Umkhiqizo wethu kufaka phakathi i-spun kanye ne-corespun polyesters kuya kuma-nylon nama-polyester ama-wax, atholakala ngosayizi abahlukahlukene nokucaciswa ukuze ahlangabezane nesidingo ngasinye samakhasimende. Ukuthungwa kwentambo yokuthungwa kwe-MH kubakhiqizi bomhlaba jikelele bezingubo, okombhede, ukhaphethi, imfashini yasekhaya, yezimboni, yokufaka neminye imikhiqizo ethunga emhlabeni wonke, yamukelwa kabanzi ngamakhasimende omhlaba wonke anekhwalithi ephezulu kakhulu ngentengo yokuncintisana.
Imfashini Yezingubo Zokugqumisa:
Imboni ye-MH Embroidery Thread inesethi ephelele yomugqa wokukhiqiza wokuxubha, ukudaya, ukubumba nokubumba, okuqinisekisa ukukhiqizwa okufika ngesikhathi okunekhwalithi enhle kakhulu i-rayon embroidery ngentambo futhi polyester embroidery ngentambo, umthamo wethu wonyaka wokukhiqiza yi-10000 + ton. Ukuphakama okukhulu, ambalwa okuhlangene, umbala omuhle, isibambo esincane nokukhawuleza kombala yilokho esikunikezela kumakhasimende.
Kokubili i-MH Yokuhlungula I-Thread Industry kanye ne-MH Embroidery Thread Industry ine-certificate ye-ISO9001 ne-OEKO-TEX, sibheka ukuvikelwa kwemvelo, minyaka yonke ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla kanye nobuchwepheshe obukhulayo, ukuze sisebenzise kahle kakhulu izinto zokusetshenziswa, amandla namanzi.